Puntland oo taageertay Isbaheysiga Sacuudiga, baaqna u dirtay dowladda Federaalka (Akhriso)
Maamulka Puntland ayaa maanta go’aan ka soo saaray xiisada siyaasadeed ee u dhaxeeya wadamada Khaliijka, iyadoo taageertay Isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudi Carabiya.
Madaxweynaha Puntland oo safar qaadanaya todobaad ugu ambabaxay Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa shalay gelinkii dambe u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo uga sii gudbayo dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta.
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirka Madasha ee ka furmaya Muqdisho.
C/wali Gaas “Dagaalka Al-Shabaab ma dhamaan, waa yimaadeen waana laga adkaatay”
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo shalay dib ugu laabtay magaalada Garowe, kadib safar uu muddo bil ku dhow uga dibada ugu maqnaa, ayaa ku baaqay in laga feejignaado weerarada Al-Shabaab ku soo qaadayaan deegaanada Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo ka baaqsan raba Shirka Istanbul, kuna wajahan Washington
Warar soo baxayay 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas uu ku sii jeedo magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka, halkaasoo uu 20-kii sano ee u dambeeyay ku noolaa, Macalina ka ahaa Jaamacad ku taal.
Madaxweynaha Puntland oo shacabka Gaalkacyo ugu baaqay inay adkeeyaan heshiiskii Nabadda
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Gaalkacyo ee dhex maray Maamulada Puntland iyo Galmudug, kadib dagaalo dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada bishii la soo dhaafay.
C/wali Gaas “Xuduuda Puntland waxay noqoneysaa Godinlabe iyo Guriceel”
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in maamulkiisa uusan aqbali doonin wax kasta ee ka soo baxa shirka Cadaado, isagoo xusay in xuduuda aanay noqon doonin Gobolka Nugaal.
C/wali Gaas “Puntland waxay ka digeysaa in lagu xadgudbdo Dastuurka iyo qawaaniinta dalka”
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ka digay in lagu xadgudbo Dastuurka KMG iyo qawaaniinta dalka u yaala, isagoo xusay in haddii laga leexdo nidaamkii federaalismka ee lagu heshiiyay ay Puntland tashan doonto.
Madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu wali socdo baaritaanka weerarkii Garowe
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu wali socdo baaritaanka weerarkii 20-kii bishan lagu qaaday Gaari ay la socdeen shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobey lagula eegtay nawaaxiga Xafiiska Qaramada Midoobey ee magaalada Garowe.
Dr. C/wali Gaas oo muujiyay wal walka ay Puntland ka qabto qodobo ka mid ah heshiiskii Jabuuti
Sagal Radio Services • News Report • December 23, 2014
Madaxweynaha Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay heshiiskii magaalada Jabuuti ay ku gaareen Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in qaar ka mid ah qodobada lagu heshiiyay ay diidan tahay Puntland.
Sagal Radio Services • News Report • September 21, 2014
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u diray bulshada Puntland baaq ku aadan Maalinta Nabadgelyada Dunida oo sanad kasta maata oo kale [August 21] caalamka oo dhan laga xuso.
C/Wali Gaas oo sheegay in uu Dowlada kala hadlaayo Khilaafka u dhaxeeyo.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay inuu kala hadlo dowladda dhexe ee Soomaaliya murankii ka dhashay maamul u sameynta gobollada dhexe ee Soomaaliya.